Stereotypes famoronana | Famoronana an-tserasera
Jesus Arjona Montalvo | | mpanakanto, sary
Ny andian-dahatsoratra fanoharana fa hasehonay anao izy ireo, asan'ilay mpamorona Thai Dmitry Narozhny, izay mitady hisolo tena ny karazana Creative Stereotypes, na Freelance, eo amin'ireo mpandalina, mpandahatra fandaharana, mpamorona sns. Azo inoana fa maro aminareo no mahafantatra ny sasany amin'ireo sary, izay ho an'ny fomba maro dia maro, geeks, geeks na minimalista, manomboka milamina ka hatrany amin'ny vaovao, manomboka milamina ka misavoritaka. Fantatro amin'ny farany an'ny Creative Stereotypes. Iza no ahalalanao ny tenanao?
Ity misy tantaram-piainana fohy an'ny mpanao sary Dmitry Narozhny.
JOBA: Digital [Fitaovana fandokoana SAI]
FAMPIANARANA: Zavakanto ao amin'ny Diaghilev Lyceum, Yekaterinburg (Russia) .
Boky tantara an-tsary momba ny mpanakanto mpanao sary Vitaliy.
Inona ny torohevitra kanto sarobidy indrindra azonao, ary avy amin'iza?
Tiako ny filazan'i W. Somerset Maugham momba ny aingam-panahy: 'Manoratra aho na manao sary rehefa tonga ny aingam-panahy. Soa ihany fa mamely ahy isa-maraina amin'ny sivy ora, hahaha.
Raha te hahalala asa bebe kokoa ianao amin'ny Dmitry Narozhny, tsidiho ny tranonkala avelanay ho anao amin'ny farany. Ao amin'io tranonkala io, misy fanoharana bebe kokoa tsy ny Stereotypes momba ny famoronana ihany, fa ny asa maro izay efa nataony nandritra ny androm-piainany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Stereotypes famoronana
Ny endrik'ireo birao manintona indrindra eto an-tany